Umdlalo omusha utholakala ku-Apple Arcade: Legends of Kingdom | Izindaba ze-IPhone
Umdlalo omusha otholakala ku-Apple Arcade: Legends of Kingdom
Izinganekwane zoMbuso Rush ngumdlalo omusha otholakala ku-Apple Arcade, ipulatifomu ebingakasitholi isihloko esisha izinyanga ezimbili, ipulatifomu leyo Ngingaba nezinsuku ezibaliwe ngoba, yize itholakala nge-Apple One, abasebenzisi Abakhombisi intshisekelo kule nkundla.
Ngo-Ephreli 2, i-Apple yengeze izihloko ezintsha eziyishumi nambili ku-Apple Arcade, izihloko ezifana ne-NBA 2K21 Arcade Edition ne-Star Trek: Izinganekwane ukubala eziteleka kakhulu, ngaphezu kwenani elikhulu lakudala. Kusukela manje, le nkundla inesomiso sesihloko, isomiso esiphele ngalesi sihloko esisha, esizolandelwa yiFrenzic: Isikhathi esengeziwe ngoJuni 18.
Izinganekwane zoMbuso a dlala indima lapho kufanele sikhethe iqembu lamaqhawe, phakathi kwabangu-11 abatholakala ngamakhono namandla ahlukile, ukuhamba embusweni omnandi futhi silwe nezilo eziyingxenye yosongo lwangaphandle.
Njengoba siqhubeka nomdlalo, siyahamba ukuvula amaqhawe amasha esihlokweni lapho kufanele sihambise amaqhawe ethu ngegridi enezinhlangothi eziyisithupha ukuze sivumelanise amakhono abo namaqhinga ethu okulwa.
Lesi sihloko esisha sitholakala kuphela nge-Apple Arcade ye-iPhone, i-iPad, iMac ne-Apple TV. Iyahambisana namadivayisi anezikrini zokuthinta futhi singakwazi sebenzisa izintambo zokulawula.
Ukushisa kuyeza, ukushisa okuhambisana neholide lezinyanga ezintathu labancane, ngakho-ke kungu-mi-oment ekahle yokusebenzisa le nkundlaKodwa-ke, kubonakala sengathi, ngokungafani nanyakenye ngalesi sikhathi, izindaba, uma zifika, zizokwenza kanjalo ngokudonsa.
Izinganekwane zoMbuso Rush - RPG
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » Imidlalo ye-IPhone » Umdlalo omusha otholakala ku-Apple Arcade: Legends of Kingdom
Isikhangiso "esiculwa" se-iPad Pro lapho i-Apple ikhombisa khona amandla ayo